ड्राइभरसँग आँखा जुध्ने बित्तिकै बस खस्यो « Pahilo News
प्रकाशित मिति :7September, 2016 2:40 pm
दोलालघाटमा खाना खाने बेलासम्म मैले र दिदीले निकै कुराकानी गरेका थियौँ । खाना खाएर बसमा चढेपछि मलाई निद्रा लाग्यो । म दिदीकै शरीरमा अडेस लागेर सुतेँ । बस दुर्घटना हुने समयन्दा केही निमेषअघि म दिदीको शरीरकै सहारा लिएर मस्त निद्रामा थिएँ । दोलालघाटपछिका बाटाका दृश्यहरु मलाई केही पनि थाहा छैन । मैले अघि पनि भने– म दुर्घटना हुनुभन्दा केही निमेष अघि मात्रै ब्युँझिएकी थिएँ । सायद दुर्घटनाको दृश्य नियाल्न मेरा आँखा खुलेका रहेछन् ।
म र दिदी ठ्याक्कै ड्राइभरको सिट नजिक थियौँ । मेरो आँखा ड्राइभरसँग जुध्यो । ड्राइभरले ठूला–ठूला आँखा पारेर हामीतिर हेरे । उनको त्यो हेराइ यति डरलाग्दो थियो कि, ऊ निकै आत्तिएको र केही विपद्मा पर्न लागेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । मैले त्यो घटना दिदीलाई भन्न नभ्याउँदै ड्राइभरले हामीतिर हेर्ने र गाडी चिप्लिने एकै पटक भयो । हेर्दाहेर्दै सडकमा गुडिरहेको गाडी बाटोमुनि खसिसकेको थियो । गाडी बाटोभन्दा तल खसेपछिका केही कुरा पनि मलाई थाहा छैन ।
गाडी खसेपछि म कहाँ छु ? के भयो ? सबै सपना जस्तो मात्र लाग्यो । अलिअलि ऐया–ऐया भनेको याद छ । त्यतिबेला मेरो आँखा खुलेका थिएनन् । आमा दुर्घटनास्थलमा आउनुभएको अलिअलि याद छ । मान्छेहरु बोलेका, रोएका र चिच्याएका आवाजहरु मेरा कानमा ठोक्किन्थे । मलाई ती दृश्यहरु ठ्याक्कै सपना जस्तो लागेको थियो । मैले मेरो परिवारलाई काठमाडौंमा सम्पर्क गरिदिनु भनेर जीवन दाइ (जीवन राई) को नम्बर दिएछु । त्यसपछि मलाई धेरै सम्झना छैन ।
मेरो होस खुल्दा सबैभन्दा पहिला दिदीलाई सम्झिएँ । मसँगै जानु भएकी, दुर्घटनामा पर्नुअघि मलाई अँगालो मारेर सुतेकी दिदी मेरो साथमा हुनुहुन्थेन । मैले दिदी खोई ? भनेँ । दिदी र मसँगै यात्रा गरेका ती यात्रुहरुको अवस्था के भयो होला भन्ने लाग्यो । त्यसपछि विस्तारै मन बुझाउँदै गएँ । लामो समयको आरामपछि मेरो त सामान्य जीवनमा फर्किने सम्भावना छ । तर, मसँगै यात्रा गरेर र ज्यान गुमाएका यात्रीहरुको अवस्था सम्झिँदा अहिले पनि पीडाबोध हुन्छ ।
म अहिले अस्पतालको बेडमा छु । कति मान्छे मरे, कति घाइते भए, मलाई सबै थाहा छैन । म मरेर पनि बाँचेकी छु । कति धेरै सपनाहरु साँचेकी थिएँ । मेरा कतिपय सपना र योजनाहरुलाई मादनकुँडारीमा एक पटक चिप्लिएको बसले उडाउन लागेको थियो तर म बाँचेर आएँ । अब त झन् केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । पाँच–सात महिना मलाई सामान्य जीवनमा फर्किन समय लाग्ला । त्यसपछि भने म नियमित काममा फर्किन्छु ।
म अहिले ट्रमा सेन्टरको बेडमा छु । मसँगै यात्राका क्रममा मृत्यु भएका सबैलाई यही बेडबाट सम्झिरहेकी छु । अमिलो मन लिएर म यही बेडबाट मृतकहरुको चीरशान्ति र परिवारप्रति हार्दिक समवेदना दिन चाहन्छु । मरेर जानेहरु गइसके । यो संसार एउटा मञ्च हो, हामी त्यही मञ्चका पात्रहरु हौँ । जीवन भनेको एउटा नाटक हो । म नास्तिक हुँ तर पनि भन्न चाहन्छु– सबै कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन, सबैले भन्ने गरेको भगवान (अदृश्य शक्ति) को हातमा हुन्छ ।